मि´चिएको सी'मा फि´र्ताको माग ग´र्दै धु र्मुस सुन्त ली लि`पुलेकमा [भि डियोस हित] -
मि´चिएको सी’मा फि´र्ताको माग ग´र्दै धु र्मुस सुन्त ली लि`पुलेकमा [भि डियोस हित]
काठमाडौं । श्रीमान् देशको ने तृत्व गरिरहेका हुन्छन् । यहीबेला को रोना संक्रमणको महा मारी फैलिन्छ । सं,क्रमणको जो’खिम कम गर्न भन्दै सरकारले देशमा लक डाउन गरिरहेको हुन्छ । लक,डाउनको विकल्प हुन सक्छ कि सक्तैन ? त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । तर, निरन्तर लकडाउन थपिरहन्छ । लक डाउनबाट हुन जाने नका रात्मक प्र भावबाट कसरी बाहिर निस्किन सकिन्छ ? सरकारसँग कुनै योजना छैन । सरकारले बिनायोजना लकडाउन थपिरहँदा जनता को रोनाले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउला भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका श्रीमान्‌लाई सम्झाउँदै घरको कौसीमा निस्किएकी श्रीमतीले आफ्नै जमिनमा छिमेकीले बाटो खनेर गाडी गुडाएको देख्छिन्।
‘लकडाउनको मौका छोपेर अकार्का जग्गा मा बाटो खनेर छिमेकीले त गाडी पो गुडाइसकेका रहेछन्,’ श्रीमतीले भन्छिन् । श्रीमान्‌ले यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।श्रीमतीले द’बाब दिँदै भन्छिन्, ‘यो छिमेकीको मिचाहा प्रवित्तिवि’रुद्ध क’डा विज्ञप्ति निकाल ।’
आफ्नै जग्गा मि’च्दा पनि श्रीमान् भने खासै ग’म्भीर देखिँदैनन् । आवेशमा आउन नहुने बताउँछन् । कू टनीतिक तवरले समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्ने बताउँछन् । श्रीमती भन्छिन्, ‘को छिमेकी त्यो छिमेकी होइन छि ! मेकी हो ।